Welcome Xubnaha New
Ku soo dhawow our forum!
Annaga iyo xubnaha our qofka aad tahay, waxa aad jeceshahay u sheeg sababta aad iyo xubin ka mid ah Rikoooo noqday.
Waxaan soo dhawaynaynaa dhammaan xubnaha cusub, waxaan rajaynayaa in aad aragto agagaarka badan!
Hi .... sano 2 11 bilood ka hor #697
Waxay ahayd waqti aad u dheer tan iyo markii aan booqday forumka. Hi dhammaan xubnaha cusub. kaliya waxaad ka hesheen oo noqday xubno ka mid ah goobta ugu fiican ee waa nooc. Waxaad sameeyay qalad lahayn oo uu sameeyo muuqaal sidaas, waxaan heysanaa oo ku saabsan diyaaradaha 50, oo dhan gebi ahaanba ammaan ah. Waan ogahay marka aad timaado goobta Fikirkaas oo ah buunafuufid xusuus aad, mar walba ma ku kalsoon tahay. Waad og tahay .... (haddii ay u muuqato mid aad u wanaagsan, waxa ay u badan tahay). Halkan ma joogo .... waxay yihiin sida 12 ama 13 sano ee BIZ iyo dhibaatooyinka 0. Geeeez ... waxaan ka dhawaajin sida a tusineysaa frickin. Waxaan idiin ballanqaadayaa, Anigu ma ihi. Laakiin si kastaba, soo dhaweyn si aad xubnaha cusub.
user soo socda (s) ayaa sheegay in Waxaad ku mahadsan tahay: Yustinzz
Hi .... sano 2 11 bilood ka hor #701
Kaliya waan soo qaatay P3D V4 iyo goobtani waa badbaadin nololeed. Waxaan hayaa wax aan duulo illaa inta aan awoodi karo lacag-bixin dheeri ah oo aamin ah oo lagu daro.
Time si ay u abuuraan page: seconds 1.100